Barnaamijka Gargaarka Wadajirka ah ee Mulkiilaha - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Caawinta Guri La'aanta|Barnaamijyada Maalgelinta Mulkiilaha|Barnaamijka Gargaarka Mulkiile Xaddidan|Barnaamijka Gargaarka Wadajirka ah ee Mulkiilaha
Barnaamijka Gargaarka Wadajirka ah ee Mulkiilaha
Qoraal muhiim ah:
Codsi kasta oo la ansixiyay oo la bixiyay ayaa ka mamnuucaya mulkiilaha (ama wakaaladda wakiilka mulkiilaha) inuu tallaabo sharci ah ka qaado kiraystaha magdhawga ama kirooyinka haray ee lagu lahaa laga bilaabo Maarso 1, 2020, illaa Diseembar 31, 2021.
Barnaamijka Relief ee Mulkiilaha wuxuu bixin karaa lacag dhan $ 15,000 kirooyinka aan la bixin si toos ah milkiilaha marka shuruudaha hoose la buuxiyo. Milkiile kasta wuxuu xaq u leeyahay haddii hantidooda kirada ah ee Washington oo kiraysteyaasheeda ay leeyihiin dheelitir kiro oo aan la bixin laga bilaabo Maarso 1, 2020, ilaa Disembar 31, 2021, ayna yihiin:
Dakhli hoose, awood yar ama dhibaato yar, iyo
Ku liicisay a qorshaha dib u bixinta, ama
Ma ka baxday ama ka tagtay guriga kirada ah
Kiraystayaasha la joojiyay ka saaristu xaq uma laha barnaamijkan.
Soo noqnoqoshada iyo kharashyada xilliyeed ee lagu cadeeyay heshiiska kirada ee isticmaalka iyo degganaanshaha dhismaha, oo ay kujiraan khidmadaha korantada markii lagu daro dacwada soo noqnoqda iyo tan caadiga ah. Kharashyada aan la bixinaynin sida lacagaha soo daahay, magdhowyada, deebaajiga, kharashyada sharciga, ama ujrooyinka kale, oo ay ku jiraan khidmadaha qareennada, laguma darin.
Maxkamad amar ku bixisay Qoraal Celin oo u ogolaanaya kireeyaha inuu la wareego guriga kirada ah. Foomka Dib u Celinta ee la fasaxay ayaa u oggolaan doonta milkiilaha inuu ku sii socdo hannaanka sheegashada Mulkiilaha Covid Relief.
Dakhliga ka hooseeya ama ka hooseeya Dakhliga Mediya ee Aagga oo ay qeexday Waaxda Mareykanka ee Guryeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka. si loo helo xadka hadda jira.
La'aanta awood ay ku soo saaraan dakhliga looga baahan yahay bixinta kirada.
Lumis dakhli ama kheyraad lama filaan ah oo dhibaato ku ah bixinta kirada.
Sida Loogu Qalmo Barnaamijka Gargaarka Mulkiilaha Xaddidan
Ganacsigu wuxuu dib u eegi doonaa, ansixin doonaa oo bixin doonaa sheegashooyinka sida ugu dhakhsaha badan. Si kastaba ha ahaatee, ku guul darreysiga bixinta dukumiinti habboon si loo qanciyo shuruudaha hoose waxay sababi kartaa in la diido sheegashada. Fadlan dukumiintiyada soo socda ayaa la sawirey si loogu lifaaqo sheegashadaada. Waxaan codsan doonnaa dukumentiyo maqan laakiin ma sameyn karno wax ka reeban dukumentiyada aan la heli karin. Sheegashada lama oggolaan karo haddii aanaan helin dhammaan dukumiintiyada loo baahan yahay ama caddaymaha taageersan ee la codsaday.
Dukumiintiyada looga baahan yahay sheegashada kirada luminta:
Hel Washington Aqoonsiga Iibiyaha Gobolka oo dhan tirada
Heshiis kiro qoran oo la fuliyay oo u dhexeeya kireeyaha iyo kiraysteyaasha
Buug kirayste oo muujinaya dhammaan kharashyada, bixinta iyo isku dheelitirka miisaanka ugu dambeeya eber
Warqad dhigaal ah oo kireyste oo ah kireyste ka baxay guriga
Nuqul ka mid ah kuwa dib loo dhigay qorshaha dib u bixinta haddii kireystuhu mid dilo
Qorshe dib-u-bixin dib-u-habayn ah oo buuxineysa shuruudaha ESSB 5160 oo uu saxeexay kirayste iyo milkiiluhu
Buuxi foomka gudbinta sheegashada oo dhan
Iskuxiraha Barnaamijka Gargaarka Wadajirka ah ee Mulkiilaha
Halkan Guji si aad u Dalbato Lacag celin
Lambarka Aqoonsiga Iibiyaha Gobolka oo dhan
Xaashida Qorshaha Dib-u-bixinta